Monday December 23, 2019 - 19:40:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xoogag katirsan XSHM
Saaka aroortii hore ayay ciidamo katirsan Xarakada Al Shabaab waxay weerar kula jarmaadeen saldhig maleeshiyaad daacad u ah maamulka Koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaanka Goofguduud Buureey.
Dagaalka oo muddo saacada ah socday ayaa sababay khasaara xooggan oo dhabarka loo saariyay maleeshiyaadkii Koonfur Galbeed, ilo wareedyo ayaa sheegaya in xoogaga Jihaadiga ah ee weerarka qaaday ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta deegaanka ayna cagta mariyeen saldhigyadii melleteri ee halkaas kuyiillay.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidamada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in dagaalkii saaka lagu dilay 11 Askari oo uu kamid yahay Macallim Dhaayoow oo ahaa taliye ku xigeenkii saldhigga Goofguduud Buureey.
Wararka ayaa intaas ku daraya in xoogaga Al Shabaab ay gacanta ku dhigeen saano hub ah oo uu kamid yahay qoriga loo yaqaan PKM ama daba miinshaar, dhinaca kale qarax xooggan ayaa lagu weeraray ciidamo kasoo gurmaday magaalada Baydhabo kunasii jeeday Goofguduud.
Warar lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in qaraxu uu burburiyay gaari Cabdi Bile ah oo uu ku rakibnaa qori Dhashiike ah waxaana dhimasho iyo dhaawac noqday dhammaan ciidamadii gaariga saarnaa.
Xaaladda Goofguduud Buureey oo qiyaastii 30 KM dhanka waqooyi galbeed uga beegan magaalada Baydhabo ayaa deggan iyadoona maleeshiyaad gurmadka ahaa ay dib ugu laabteen xarunta gobolka Baay.